IT Executive | Job in Myanmar ﻿
13.11.2018, Full time , Retail / Wholesale
Company: ABC Convenience Store [Active Business Consolidation Co.,Ltd.]
•	Computer Hardware & Software, Networking ပိုင်းကိုကျွမ်းကျင်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	B.C.Sc (သို့) ဘွဲ့ရ (သို့) IT နှင့်ပတ်သက်သော Diploma (or) Certificate ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။
•	အသက်(၂၅-၃၅)နှစ်အတွင်း ဖြစ်ရမည်။
•	IT နယ်ပယ်တွင် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၂) နှစ်ရှိရမည်။
Work location 11,Set Hmu 6th St.,Industrial Zone,South Okkalapa
Job Function: IT Executive
Job posted: 13/11/2018
ABC Convenience Store [Active Business Consolidation Co.,Ltd.]
159 Days, Full time , Retail / Wholesale
Outlet Operator/Cashier •	ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်ပြီးလူမှု့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည်။ •	အရောင်းလုပ်ငန်းကိုစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ပြီးနေ့/ညဆိုင်းများဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ •	Convenience Store/Mini Marketလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူကိုဦး� ...
160 Days, Full time , Retail / Wholesale
•	Computer Hardware & Software, Networking ပိုင်းကိုကျွမ်းကျင်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
161 Days, Full time , Retail / Wholesale
•	နေ့/ည အဆိုင်းများဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ပြီး ကျန်းမာရေးကောင်မွန်သူဖြစ်ရမည်။
•	လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်မူတည်၍ ပညာအရည်အချင်းလျော့ပေါ့စဉ်းစားပေးမည်။
•	Supermarket, Convenience Store , Mini Market, Hyper Market, Whole Sale Center များတွင် အတွေ့အကြုံ ရှိသူများအားဦးစားပေးမည်။
•	IT နှင့်ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။ •	နေ့/ညအဆိုင်းများဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Sales Supervisor / Sales Incharge •	သွက်လက်ချက်ချာ၍ စကားပြောရာတွင် ရှင်းလင်းစွာပြောဆိုတတ်ရမည် •	Supervisor ရာထူးအတွက် လက်အောက်ရှိ Sales Staff များအား ပိုင်နိုင်စွာ အုပ်ချုပ်နိုင်ရမည်။
213 Days, Full time , Retail / Wholesale
•	၀န်ထမ်းများကိုကောင်းစွာစီမံအုပ်ချုပ်နိုင်ရမည်။ •	Computer အခြေခံပိုင်းသိရှိနားလည်သူဖြစ်ရမည်။
IT Executive IT / Computing Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon ABC Convenience Store [Active Business Consolidation Co.,Ltd.] IT/Computing Jobs IT/Computing Jobs IT Executive Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Work in Yangon (Rangoon)(4568)